musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Lufthansa inowedzera ina nyowani Airbus A350-900 jets kune zvikepe
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Germany Kuputsa Nhau • Investments • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • Technology • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau
Iyo Airbus 'A350-900 yakarongerwa kupinda sevhisi neiyo Lufthansa's core brand kubva kuhafu yekutanga ya2022, ichisimbisa iyo shanu-nyeredzi yendege muripo wepayimendi.
Lufthansa Boka rinosaina kurerutsa zvibvumirano zveane mana ekuwedzera Airbus A350-900 marefu kutakura ndege.
Ndege dzinoita mupiro mukuru mukusimudzira kwakanyanya kuburikidza ne30 muzana mafuta uye CO2 kuchengetedza.
Lufthansa Group inoronga kuendesa ndege nyowani yeAirbus A350-900 kubva kune yekutanga hafu ya2022.
The Lufthansa Boka iri kukuchidzira kuvandudza kwechikepe chayo chengarava refu. Boka rakasaina mairesi mana-e-e-e-e-iyo-uye-anoshanda-mafuta ndege yeAirbus A350-900 nendege nevashoma Avolon, SMBC Aviation Capital Ltd. uye Goshawk. Nekuda kweizvozvo, boka reA350 reboka richakura kuenda ku21 ndege pakutanga kwa2022.
The Airbus'A350-900 yakarongerwa kupinda sevhisi neiyo Lufthansa's brand brand kubva pahafu yekutanga ya2022, ichisimbisa iyo nyeredzi shanu-yendege muripo wekutanga.
Dr. Detlef Kayser, Nhengo ye Executive Board Deutsche Lufthansa AG, akati:
“Airbus A350 ndeimwe yendege dzazvino uno munguva yedu. Yakanyanya mafuta-inoshanda, yakanyarara kwazvo uye yakawanda mari kupfuura avo vayakatangira. Vatengi vedu vanokoshesa kwete chete kugadzikana asiwo iyo yekutanga kutiza ruzivo neiyi ndege. Zvibvumirano zvekubvumidza zvinotibvumidza kuramba tichichinjika pakuronga ngarava uye nekushandisa zvakanyanya mikana inoshamisa yemusika. "
Mapatya-injini Airbus Ndege yeA350-900 inodya chete zvakapfuura 2.5 litita eparafini pamunhu mufambi pamakiromita zana achiyerera. Izvo zvakapoterera makumi matatu muzana muzana pane avo vakavatangira, zvine mhedzisiro yakaenzana pane iyo carbon tsoka. Ndege inozotsiva ndege-refu-refu kubva kumhuri yeAirbus A100. Pakazosvika pakati pemakore gumi, chikamu chemajini mana-enjini mumafambisi ekureba-refu seanotarisirwa kuwira pasi pe30 muzana. Dambudziko risati rasvika, mugove wacho waive wakakomberedza makumi mashanu muzana.
Kupfuurirazve, iyo nyowani, inoshandisa mafuta ndege inoderedza mitengo yekushandisa neinenge 15 muzana zvichienzaniswa nemhando dzavanozotsiva.
Sechikamu chechirongwa chayo chakazara, chenguva refu yezvikepe zvemazuva ano, iyo Lufthansa Boka ichatora kuendesa kwehuwandu hwedzimwe 177 pfupi-, dzepakati nepakati-refu dzinotakura ndege gumi rino.
Robert Charles anoti:
Gunyana 6, 2021 pa 07: 33
Iyo Airbus A350 ndiyo yepasirese nendege inoshamwaridzika kwenguva refu. Lufthansa yakati yabvuma kukwereta ina ndege nyowani dzeAirbus A350-900, dzinotora ndege nyowani dzakasiiwa dzisina dzimba.